On oct 30, 2019 6 222
Tafapetraka omaly, tamin’ny fomba ofisialy, tao Miarinarivo, Itasy, ny governoram-paritry vaovao, ny Jeneraly Maherizo Solofonirina. Izany dia araka ny didim-panjakana laharana 2019/1866, tamin’ny 25 Septambra 2019 izay nanendry azy. Nisolo tena ny Filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra, ny ny Ministry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Atoa RAZAFIMAHEFA Tiana sy ny Tale Jeneralin’ny fanatanterahana ny tetikasan’ny Filoha, Atoa ANDRIAMANANORO Augustin.
Nanome voninahitra ny fotoana, nisolo tena ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandariamaria ny Jeneraly RABEHAJASOA Andrianarivo, Mpandrindra ankapobeny ny asa stratejika. Tany an-toerana ihany koa ny Jeneraly RANDRIAMANESY André, lefitra voalohan’ny Komandin’ny Zandarimariam-pirenena.
Nialohan’ny lanonana fametrahana azy ho Governoram-paritra, nomena ny mari-boninahitra « Grand officier de l’ordre national » ity manamboninahitra jeneraly ity.
Nandritry ny lahateny nataony, nanambara ny governora vaovaon’Itasy fa laharam-pahamehana ho azy ny fananterahana ny velirano 13, nomen’ny Filoham-pirenena. Nasongadiny manokana tamin’izany : ny sosialim-bahoaka toy ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. » Hisy ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny mpitandro filaminana any an-toerana hifehezana izany », hoy izy.
Nasiany tsindrm-peo ihany koa anefa ny olan’ny jiro sy rano, ny lalana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fambolena sy fiompiana, indrindra ny tontolo iainana dia ny ady amin’ny doro tanety. Nanome toky ny Governora vaovao fa tsy maintsy tratrarina ny teny filamatry ny faritra hoe: “Faritra Itasy, vonona ka tsy maintsy mandroso”.
Miantso ny ankolafy rehetra any an-toerana izy mba hiray hina sy hiara-hiasa aminy fanatrarana izany.